Kuratidza zvinyorwa neelebheri Dam
Dhaka reMvura Les Království
Sango roKumusoro idziva remupata rinogarira pane Rwizi rweElbe rwakavakwa muna 1920. Inowanikwa pedyo nemusha Tešnov munharaunda yeCadastral Bílá Třemešná, 4 km kumusoro kubva kuguta Dvůr Králové nad Labem, mune mupata wakamanikana, unopfuura nepakati peKocléřovský ridge. Kumhiri kuruboshwe kwakamisikidzwa nesango hombe kuoma Kingdom, iyo yakasara yedondo muganho wekare, mushure mekudaro iyo dama rakatumidzwa zita rayo. Iyo dhamu haina kujairika mumamiriro eCzech nekuda kwekuvakisa kwayo kwakanaka. Nhasi, nekuda kwekusiyana kwayo, inzvimbo inozivikanwa yekushanya. Kubva 18 Kubvumbi 1964 dhamu uye chinzvimbo chemagetsi chakanyoreswa sechiyeuchidzo chetsika chisingachinjiki, kubva musi wa 1 Chikunguru 2010 chave chiitiko chetsika yenyika.
Mushure memafashama aniparadza a 1897, akarova mupata weElbe kusvika paPardubice, zvakatemwa kuvaka nzvimbo mbiri dzemvura idzo dzaizobata rwizi mvura - madamu eRabská (padhuze Špindlerův Mlýn) neTešnovská (madama anhasi Les Království). Muna 1903 nheyo yepurojekiti yekuvaka yakagadziriswa neDhipatimendi reTekhnoloji yeRwizi Kurapa mu…